Ke adianade do, okirikiri nhọrọ ukwuu imewe, osisi decorations na Dino toy enye etc.is dị na anyị na-ejere mgbe ire ......
Anyị Nlụpụta Animatronic dinosaurs
Ịgbado ọkụ Steel Structure nke Animatronic dainosoo
Anyị na-eme n'ibu imewe nke ọ bụla dainosoo n'ihu mmepụta mee themhave a ọma etiti ma hụ na ha nwere ike ịrụ ọrụ na-enweghị ihe ọ bụla frictions, ka dainosoo nwere ike nwere ogologo ọrụ ndụ.
Jikọọ All Motors na ọkpụkpụ, udidi Work na High njupụta ụfụfụ
High njupụta ụfụfụ hụ ihe nlereanya ọzọ lezie. Professional n'ilu ọlu nna-ukwu nwere ihe karịrị 10 afọ ahụmahụ. Zuru okè dainosoo aru n'ike-n'ike nnọọ dabeere dainosoo ọkpụkpụ na sayensị data. Gosi ọbịa ezi uche na lifelike dinosaurs.
Sking-grafting Site Smearing Silicone
Egosipụta nwe nwere ike tee dinosaurs dị ka ndị ahịa chọrọ. Onye ọ bụla dainosoo ga-aga n'ihu ejikwara ule otu ụbọchị tupu mbupu.
Emechara Animatronic dainosoo On Site